လီဗာပူးလ်ဟာ ပရီးမီးယားလိဂ် (၆)ပွဲဆက် အာဆင်နယ်ကို မရှုံးခဲ့ပါဘူး
အာဆင်နယ်ကွင်းမှာ နောက်ဆုံး (၃)ကြိမ်ဆက် ရှုံးပွဲမရှိတဲ့မှတ်တမ်းကို လီဗာပူးလ် ဆက်ထိန်းနိုင်မလား
3 Nov 2018 . 3:36 PM
ပရီးမီးယားလိဂ်ပွဲစဉ် (၁၁)ပွဲတွေမှာတော့ ပွဲကြီးပွဲကောင်းအဖြစ် အီမရိတ်စ်မှာ ကစားမယ့် အာဆင်နယ်နဲ့ လီဗာပူးလ်တို့ ပွဲစဉ်ပါဝင်နေတယ်။ မန်ယူ၊ စပါးအသင်းတို့က အဝေးကွင်းမှာ ခြေစွမ်းမာကျောတဲ့အသင်းတွေဖြစ်တဲ့ ဘုန်းမောက်၊ ၀ုလ်ဗ်တို့နဲ့ ကစားရမှာဖြစ်ပြီး အိမ်ကွင်းကစားရမယ့် မန်စီးတီးနဲ့ ချယ်လ်ဆီးအသင်းတို့ ရလဒ်ကောင်းဖို့ မျာတယ်။
ဘုန်းမောက် – မန်ယူ (စနေနေ့ ည ၇း၀၀ နာရီ)
ဒီရာသီမှာ ဘုန်းမောက်အသင်းရဲ့ ရလဒ်တွေဟာ မန်ယူထက်တောင် ပိုကောင်းနေပြီး အမှတ်ပေးဇယားရပ်တည်မှုမှာလည်း ဘုန်းမောက်က (၆)၊ မန်ယူက (၈)ဖြစ်နေတယ်။ ၀က်စ်ဟမ်းကို အဝေးကွင်းမှာ ရှုံးနိမ့်ခဲ့ပြီးနောက်ပိုင်း မန်ယူအသင်း ပရီးမီးယားလိဂ် (၃)ပွဲဆက် ရှုံးပွဲမရှိ ကစားခဲ့ပေမယ့် တော်တော်လေး ရုန်းကန်ခဲ့ရတယ်။ ဘုန်းမောက်အသင်းကလည်း နောက်ဆုံး(၄)ပွဲဆက် ရှုံးပွဲမရှိသေးဘဲ အဲဒီ(၄)ပွဲမှာ (၉)ဂိုးသွင်း၊ (၁)ဂိုးပဲ ပြန်ပေးခဲ့ရတယ်။ နှစ်သင်းစလုံး ခြေတက်နေလို့ အနိုင်အသင်း ရွေးရတာခက်ပါတယ်။ သရေကျဖို့ များပြီး မန်ယူနိုင်ရင်တောင် ဂိုးမပြတ်ဘူး။
အာဆင်နယ် – လီဗာပူးလ် (စနေနေ့ ည ၁၂း၀၀ နာရီ)
ပရီးမီးယားလိဂ်မှာ (၈)ပွဲဆက် ရှုံးပွဲမရှိသေးတဲ့အသင်းနဲ့ (၁၀)ပွဲဆက် ရှုံးပွဲမရှိတဲ့အသင်း ဆုံတွေ့ကြပါပြီ။ အာဆင်နယ် နိုင်ပွဲဆက်လာပြီးမှ ပဲလေ့စ်ကို သရေကျခဲ့လို့ နိုင်ပွဲဆက်မှတ်တမ်း အဆုံးသတ်ခဲ့ရတယ်။ လီဗာပူးလ်အသင်းကလည်း ဒီရာသီမှာ ပရီးမီးယားလိဂ်ဖလားကို စိန်ခေါ်နိုင်စွမ်းရှိတယ်ဆိုတာကို ပြသနေပြီး တိုက်စစ်၊ ခံစစ်က အကောင်းဆုံးအနေအထားမှာ ရှိနေတယ်။ ဒီနှစ်သင်းမှာ တူညီတာက အမှတ်ရမယ့် အသင်းတွေနဲ့ဆိုရင် ရလဒ်ကောင်းပြီး Level တူ အသင်းတွေနဲ့ တွေ့တဲ့ပွဲတွေမှာ နိုင်ပွဲမရတာပါပဲ။ အာဆင်နယ်က ရာသီအစမှာ မန်စီးတီး၊ ချယ်လ်ဆီးတို့ကို ဆက်တိုက် ရှုံးနိမ့်ခဲ့ပြီး လီဗာပူးလ်က မန်စီးတီးချယ်လ်ဆီးတို့နဲ့ သရေကျခဲ့တယ်။ ပရီးမီးယားလိဂ် နောက်ဆုံး(၃)ရာသီဆက် အီမရိတ်စ်မှာ လီဗာပူးလ် ရှုံးပွဲမရှိခဲ့တဲ့အပြင် ပရီးမီးယားလိဂ် (၆)ပွဲဆက် လီဗာပူလ် ရှုံးပွဲမရှိတာကိုလည်း သတိပြုရမယ်။ အပြန်အလှန် သွင်းဂိုးတွေကို မြင်တွေ့ရဖို့ ရှိပြီး လီဗာပူးလ် မရှုံးလောက်ဘူးလို့ ထင်ပါတယ်။
မန်စီးတီး – ဆောက်သမ်တန် (တနင်္ဂနွေ ည ၉း၃၀ နာရီ)
(၁၀)ပွဲအပြီးမှာ (၁)ပွဲပဲအနိုင်ထားတဲ့ ဆောက်သမ်တန်ဟာ မန်စီးတီးကို ဒုက္ခပေးနိုင်မယ့် အသင်းမဟုတ်ပါဘူး။ မန်စီးတီး ဂိုးပြတ်၊ မပြတ်ဘဲ ကြည့်ရမယ်။
ချယ်လ်ဆီး – ပဲလေ့စ် (တနင်္ဂနွေ ည ၁၀း၃၀ နာရီ)
ပဲလေ့စ် နောက်ဆုံး (၅)ပွဲဆက် နိုင်ပွဲပျောက်နေပေမယ့် ခြေစွမ်းကတော့ မဆိုးဘူးလို့ ပြောရမယ်။ ဒါပေမဲ့ အဝေးကွင်းဆိုရင်တော့ သိပ် အားရစရာမရှိဘူး။ အခု ကစားရမှာကလည်း ရှုံးပွဲမရှိသေးတဲ့ ချယ်လ်ဆီးဖြစ်နေတယ်။ ချယ်လ်ဆီးအသင်း အနိုင်ရဖို့များပေမယ့် ပဲလေ့စ်အသင်းရဲ့ ခံကန်အားကြောင့် ဂိုးပြတ်ဖို့တော့ မဖြစ်နိုင်လောက်ဘူး။
19:00AFC Bournemouth? – ? Manchester United
21:30Cardiff City? – ? Leicester City
21:30Everton? – ? Brighton & Hove Albion
21:30Newcastle United? – ? Watford
21:30West Ham United? – ? Burnley
00:00Arsenal? – ? Liverpool
02:15Wolverhampton Wanderers? – ? Tottenham Hotspur
21:30Manchester City? – ? Southampton
22:30Chelsea FC? – ? Crystal Palace
Photo:Goal,The Independent,Evening Standard
အာဆငျနယျကှငျးမှာ နောကျဆုံး (၃)ကွိမျဆကျ ရှုံးပှဲမရှိတဲ့မှတျတမျးကို လီဗာပူးလျ ဆကျထိနျးနိုငျမလား
ပရီးမီးယားလိဂျပှဲစဉျ (၁၁)ပှဲတှမှောတော့ ပှဲကွီးပှဲကောငျးအဖွဈ အီမရိတျဈမှာ ကစားမယျ့ အာဆငျနယျနဲ့ လီဗာပူးလျတို့ ပှဲစဉျပါဝငျနတေယျ။ မနျယူ၊ စပါးအသငျးတို့က အဝေးကှငျးမှာ ခွစှေမျးမာကြောတဲ့အသငျးတှဖွေဈတဲ့ ဘုနျးမောကျ၊ ဝုလျဗျတို့နဲ့ ကစားရမှာဖွဈပွီး အိမျကှငျးကစားရမယျ့ မနျစီးတီးနဲ့ ခယျြလျဆီးအသငျးတို့ ရလဒျကောငျးဖို့ မြာတယျ။
ဘုနျးမောကျ – မနျယူ (စနနေေ့ ည ရး၀၀ နာရီ)
ဒီရာသီမှာ ဘုနျးမောကျအသငျးရဲ့ ရလဒျတှဟော မနျယူထကျတောငျ ပိုကောငျးနပွေီး အမှတျပေးဇယားရပျတညျမှုမှာလညျး ဘုနျးမောကျက (၆)၊ မနျယူက (၈)ဖွဈနတေယျ။ ဝကျဈဟမျးကို အဝေးကှငျးမှာ ရှုံးနိမျ့ခဲ့ပွီးနောကျပိုငျး မနျယူအသငျး ပရီးမီးယားလိဂျ (၃)ပှဲဆကျ ရှုံးပှဲမရှိ ကစားခဲ့ပမေယျ့ တျောတျောလေး ရုနျးကနျခဲ့ရတယျ။ ဘုနျးမောကျအသငျးကလညျး နောကျဆုံး(၄)ပှဲဆကျ ရှုံးပှဲမရှိသေးဘဲ အဲဒီ(၄)ပှဲမှာ (၉)ဂိုးသှငျး၊ (၁)ဂိုးပဲ ပွနျပေးခဲ့ရတယျ။ နှဈသငျးစလုံး ခွတေကျနလေို့ အနိုငျအသငျး ရှေးရတာခကျပါတယျ။ သရကေဖြို့ မြားပွီး မနျယူနိုငျရငျတောငျ ဂိုးမပွတျဘူး။
အာဆငျနယျ – လီဗာပူးလျ (စနနေေ့ ည ၁၂း၀၀ နာရီ)
ပရီးမီးယားလိဂျမှာ (၈)ပှဲဆကျ ရှုံးပှဲမရှိသေးတဲ့အသငျးနဲ့ (၁၀)ပှဲဆကျ ရှုံးပှဲမရှိတဲ့အသငျး ဆုံတှကွေ့ပါပွီ။ အာဆငျနယျ နိုငျပှဲဆကျလာပွီးမှ ပဲလစျေ့ကို သရကေခြဲ့လို့ နိုငျပှဲဆကျမှတျတမျး အဆုံးသတျခဲ့ရတယျ။ လီဗာပူးလျအသငျးကလညျး ဒီရာသီမှာ ပရီးမီးယားလိဂျဖလားကို စိနျချေါနိုငျစှမျးရှိတယျဆိုတာကို ပွသနပွေီး တိုကျစဈ၊ ခံစဈက အကောငျးဆုံးအနအေထားမှာ ရှိနတေယျ။ ဒီနှဈသငျးမှာ တူညီတာက အမှတျရမယျ့ အသငျးတှနေဲ့ဆိုရငျ ရလဒျကောငျးပွီး Level တူ အသငျးတှနေဲ့ တှတေဲ့ပှဲတှမှော နိုငျပှဲမရတာပါပဲ။ အာဆငျနယျက ရာသီအစမှာ မနျစီးတီး၊ ခယျြလျဆီးတို့ကို ဆကျတိုကျ ရှုံးနိမျ့ခဲ့ပွီး လီဗာပူးလျက မနျစီးတီးခယျြလျဆီးတို့နဲ့ သရကေခြဲ့တယျ။ ပရီးမီးယားလိဂျ နောကျဆုံး(၃)ရာသီဆကျ အီမရိတျဈမှာ လီဗာပူးလျ ရှုံးပှဲမရှိခဲ့တဲ့အပွငျ ပရီးမီးယားလိဂျ (၆)ပှဲဆကျ လီဗာပူလျ ရှုံးပှဲမရှိတာကိုလညျး သတိပွုရမယျ။ အပွနျအလှနျ သှငျးဂိုးတှကေို မွငျတှရေ့ဖို့ ရှိပွီး လီဗာပူးလျ မရှုံးလောကျဘူးလို့ ထငျပါတယျ။
မနျစီးတီး – ဆောကျသမျတနျ (တနင်ျဂနှေ ည ၉း၃၀ နာရီ)
(၁၀)ပှဲအပွီးမှာ (၁)ပှဲပဲအနိုငျထားတဲ့ ဆောကျသမျတနျဟာ မနျစီးတီးကို ဒုက်ခပေးနိုငျမယျ့ အသငျးမဟုတျပါဘူး။ မနျစီးတီး ဂိုးပွတျ၊ မပွတျဘဲ ကွညျ့ရမယျ။
ခယျြလျဆီး – ပဲလစျေ့ (တနင်ျဂနှေ ည ၁၀း၃၀ နာရီ)
ပဲလစျေ့ နောကျဆုံး (၅)ပှဲဆကျ နိုငျပှဲပြောကျနပေမေယျ့ ခွစှေမျးကတော့ မဆိုးဘူးလို့ ပွောရမယျ။ ဒါပမေဲ့ အဝေးကှငျးဆိုရငျတော့ သိပျ အားရစရာမရှိဘူး။ အခု ကစားရမှာကလညျး ရှုံးပှဲမရှိသေးတဲ့ ခယျြလျဆီးဖွဈနတေယျ။ ခယျြလျဆီးအသငျး အနိုငျရဖို့မြားပမေယျ့ ပဲလစျေ့အသငျးရဲ့ ခံကနျအားကွောငျ့ ဂိုးပွတျဖို့တော့ မဖွဈနိုငျလောကျဘူး။